ဟာဘစ်နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသိနည်းတဲ့အချက်တွေက ဘာများလဲ
UFC Lightweight ချန်ပီယံ Khabib Nurmagomedov နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်များ
6 Oct 2018 . 7:31 PM
UFC Lightweight ချန်ပီယံ ရုရှားလူမျိုး ဟာဘစ်နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ် Khabib Nurmagomedov ဟာ ချန်ပီယံဘွဲ့ ကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ကော်နာမက်ဂရီဂေါ် Conor McGregor နဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် (၈း၃၀)မှာ ထိုးသတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်ရဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ကစားသမားဘ၀ အချက်အလက် တော်တော်များများကို ပရိသတ်တွေ သိရှိပြီးဖြစ်ပေမယ့် လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ . . .
ငယ်ငယ်တုန်းက ၀က်ဝံပေါက်နဲ့ လေ့ကျင့်ခဲ့
နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်ဟာ နပန်းသတ်တဲ့ ကစားနည်းကို ၀ါသနာကြီးခဲ့ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက နပန်းသင်တန်းကျောင်းမှာ တက်ရောက်ခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့မွေးနေ့တစ်ရက်မှာ နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်ရဲ့အဖေက ၀က်ဝံပေါက်လေးတစ်ကောင် ၀ယ်ပေးခဲ့ပြီး နပန်းသတ် လေ့ကျင့်စေခဲ့တယ်။ အဲဒီဝက်ဝံကိုတော့ သံကြိုးနဲ့ ခတ်ထားရတာပေါ့။ အဲဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်က “သားတစ်ယောက်ဆိုတာ သူ ဘယ်လောက်အရည်အချင်းရှိတာကို ကိုယ့်အဖေရှေ့မှာ ပြသချင်တဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ၀က်ဝံတစ်ကောင်နဲ့ နပန်းသတ်ရတာက လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာထက် ကိုယ့်ရဲ့ အရည်အသွေးကို စမ်းသပ်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ
နပန်းသတ်တဲ့သူနဲ့ ဘောလုံးသမား သူငယ်ချင်းဖြစ်တာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်နဲ့ စီရော်နယ်လ်တို့ဟာ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းက ဆိုစီဒက်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်က လာအားပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ် နာမည်ပါတဲ့ နံပါတ်(၇) ရီးယဲလ်ဂျာစီကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်ကလည်း သူ အောင်ပွဲခံရင် တပ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ ဆံပင်တုကို လက်ဆောင်ပြန်ပေးခဲ့တယ်။
နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်ရဲ့ ဖခင်ဟာ စစ်ပြန်ကြီးတစ်ဦး
နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်ရဲ့ အဖေ Abdulmanap ဟာ ရုရှားစစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တာကြောင့် သူ့သားကို ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းလာဖို့အတွက် အသေးစား Gym ရုံလေးကို အိမ်အောက်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက လေ့ကျင့်စေခဲ့တယ်။ Abdulmanap ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နော်မာဂိုမယ်ဒေါ့ဗ်ကို ယောကျာ်းပီသစေဖို့နဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူ ဖြစ်စေချင်တာပါပဲ
နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်ရဲ့ ကစားသမားဘ၀မှာ ဒဏ်ရာပြဿနာတွေက ခဏခဏ ထိုးနှက်ခဲ့တယ်။ ပွဲမတိုင်ခင်မှ ဒဏ်ရာရတာ၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းတာတွေက နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်အတွက် သိပ်မဆန်းတော့ဘူး။
ဒါတွေကတော့ နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူသိပ်မသိတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ မနက်ဖြန်ကစားမယ့်ပွဲမှာ နော်မာဂိုမယ်ဒေ့ါဗ် သူ့ရဲ့ ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်းကို ဆက်ထိန်းနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင် .
Photo:Bloody Elbow, You Tube,MMA Mania,MMA Fighting
UFC Lightweight ခနျြပီယံ Khabib Nurmagomedov နဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
UFC Lightweight ခနျြပီယံ ရုရှားလူမြိုး ဟာဘဈနျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျ Khabib Nurmagomedov ဟာ ခနျြပီယံဘှဲ့ ကာကှယျပှဲအဖွဈ ကျောနာမကျဂရီဂျေါ Conor McGregor နဲ့ တနင်ျဂနှနေေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ မနကျ (၈း၃၀)မှာ ထိုးသတျတော့မှာဖွဈပါတယျ။ နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျရဲ့ ပရျောဖကျရှငျနယျ ကစားသမားဘ၀ အခကျြအလကျ တျောတျောမြားမြားကို ပရိသတျတှေ သိရှိပွီးဖွဈပမေယျ့ လူသိနညျးတဲ့ အကွောငျးအရာတှလေညျး ရှိပါသေးတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ . . .
ငယျငယျတုနျးက ဝကျဝံပေါကျနဲ့ လကေ့ငျြ့ခဲ့
နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျဟာ နပနျးသတျတဲ့ ကစားနညျးကို ဝါသနာကွီးခဲ့ပွီး ငယျငယျကတညျးက နပနျးသငျတနျးကြောငျးမှာ တကျရောကျခဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့မှေးနတေ့ဈရကျမှာ နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျရဲ့အဖကေ ဝကျဝံပေါကျလေးတဈကောငျ ဝယျပေးခဲ့ပွီး နပနျးသတျ လကေ့ငျြ့စခေဲ့တယျ။ အဲဒီဝကျဝံကိုတော့ သံကွိုးနဲ့ ခတျထားရတာပေါ့။ အဲဒီအကွောငျးနဲ့ပတျသကျပွီး နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျက “သားတဈယောကျဆိုတာ သူ ဘယျလောကျအရညျအခငျြးရှိတာကို ကိုယျ့အဖရှေမှေ့ာ ပွသခငျြတဲ့သူတှခေညျြးပါပဲ။ ဝကျဝံတဈကောငျနဲ့ နပနျးသတျရတာက လကေ့ငျြ့ခနျးဆိုတာထကျ ကိုယျ့ရဲ့ အရညျအသှေးကို စမျးသပျမှုတဈခု ဖွဈပါတယျ”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
စီရျောနယျလျဒို Cristiano Ronaldo နဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ မိတျဆှေ
နပနျးသတျတဲ့သူနဲ့ ဘောလုံးသမား သူငယျခငျြးဖွဈတာ နညျးနညျးတော့ ထူးဆနျးတယျ။ ဒါပမေဲ့ နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျနဲ့ စီရျောနယျလျတို့ဟာ အရမျးရငျးနှီးတဲ့ မိတျဆှတှေဖွေဈပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီတုနျးက ဆိုစီဒကျနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ပှဲမှာ စီရျောနယျလျဒိုကို နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျက လာအားပေးခဲ့ဖူးပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျ နာမညျပါတဲ့ နံပါတျ(၇) ရီးယဲလျဂြာစီကို လကျဆောငျပေးခဲ့ပွီး နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျကလညျး သူ အောငျပှဲခံရငျ တပျဆငျလရှေိ့တဲ့ ဆံပငျတုကို လကျဆောငျပွနျပေးခဲ့တယျ။
နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျရဲ့ ဖခငျဟာ စဈပွနျကွီးတဈဦး
နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျရဲ့ အဖေ Abdulmanap ဟာ ရုရှားစဈတပျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူဖွဈတာကွောငျ့ သူ့သားကို ကွံ့ခိုငျသနျစှမျးလာဖို့အတှကျ အသေးစား Gym ရုံလေးကို အိမျအောကျမှာ တညျဆောကျခဲ့ပွီး ငယျငယျကတညျးက လကေ့ငျြ့စခေဲ့တယျ။ Abdulmanap ရဲ့ အဓိက ရညျရှယျခကျြကတော့ နျောမာဂိုမယျဒေါ့ဗျကို ယောကျြားပီသစဖေို့နဲ့ အကွမျးဖကျမှုတှကေို ကာကှယျနိုငျစှမျးရှိတဲ့သူ ဖွဈစခေငျြတာပါပဲ
နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျရဲ့ ကစားသမားဘဝမှာ ဒဏျရာပွဿနာတှကေ ခဏခဏ ထိုးနှကျခဲ့တယျ။ ပှဲမတိုငျခငျမှ ဒဏျရာရတာ၊ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျ ကဆြငျးတာတှကေ နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျအတှကျ သိပျမဆနျးတော့ဘူး။
ဒါတှကေတော့ နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျနဲ့ ပတျသကျပွီး လူသိပျမသိတဲ့အခကျြတှပေါပဲ။ မနကျဖွနျကစားမယျ့ပှဲမှာ နျောမာဂိုမယျဒေ့ါဗျ သူ့ရဲ့ ရှုံးပှဲမရှိမှတျတမျးကို ဆကျထိနျးနိုငျမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျ .